Miteraka Fanontaniana Amin’ny Fangaraharan’ny Fitantanam-bola Ny Politikam-Piarahamiasa Iraisampirenena Vaovao Ao Nikaragòa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2015 5:43 GMT
Silvia Rucks. Sary nalain'ny habaka Nikaragoiana, Confidencial, nahazoana alalana ny famoahana ny sary.
Novitain'ny Confidencial (Nikaragoà) ny dika ankehitrinin'ity lahatsoratra ity ary navoakan'ny CONNECTAS sy ny Global Voices Amerika Latina indray noho ny fifanarahana fizarana votoaty.
Azo raisina ho mariky ny fiovana lehibe eo amin'ny fitantanana ny fiarahamiasa iraisampirenena, lafiny saropady amin'ny fitondran'i Daniel Ortega ny fametraham-pialan'i Silvia Rucks, diplaomaty mpandrindra maharitry ny Firenena Mikambana (ONU) ao Nikaragoà. Araka ny tatitry ny Confidencial, vavahadim-baovao Nikaragoiàna ao an-toerana, mihevitra ireo olom-pirenena nakàna hevitra fa tokony fantarina ny tena antony nahatonga ilay diplaomaty nandao tampoka ny toerany tamin'ny Zoma 9 Oktobra 2015. Manamarina ity fiovana ara-politika ity ny governemanta amin'ny filazana fa tokony tantanina mivantana tsy misy mpanelanelana ireo tetikasa efa notohanan'ny fikambanana iraisampirenena. Ho an'ny hafa, mampiseho ny fikasan'ny governemanta hampihena ny sehatra fandraisana anjaran'ny olom-pirenena izay mety ho voasariky ny hafa izany.
Tamin'ny fanambarana ofisialy tamin'ny gazety tamin'ny fiandohan'ny ny herinandro, nanambara ny solontena maharitra misahana ny Fandaharan'asa Fampandrosoan'ny Firenena Mikambana (PNUD) fa “ao anatin'ny sehatra politika vaovao momba ny fitantanana ny fiarahamiasa iraisampirenena [avy amin'ny governemantan'i Nikaragoa]”, heverina fa mety ny fiovam-pitantanana ao anatin'ny andrim-panjakana, mba ‘hanamorana ny fiampitàna any amin'ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana izay mifanaraka amin'ny maodelim-piaraha-miasa ampiharin'ny firenena. “
Niteraka ahiahy teo amin'ireo faribolana ara-diplaomatika ao an-toerana ny fanambarana. Misy ny tahotra fa mety misy ifandraisany amin'ny fanohanan'ny Pnud ny fikambanana tsy miankina ao an-toerana sy amin'i Rucks tenany ihany ny zava-mitranga. Ny endriky amantarana ny diplaomaty Orogoaiana ao anatin'ny governemanta dia irony hoe “olona tena mahaleo tena, ​tsy bemanaiky raha resaka fikambanana tsy miankina [ONG]. Resaka tanjaka no ifantohan'izany,” hoy ny loharanom-baovao iray.
Fepetra Hanakanana Lohataona ao Amerikana Afovoany?
Ny lahatsary eto ambany, nozarain'ny Confidencial, dia manazava ny fomba nanapahan'ny governemantan'i Nikaragoà hevitra, tampoka, mba hitantanana ny ankamaroan'ireo tetikasa mifandray amin'ny fiarahamiasa iraisampirenena. Midika fampiatoana ireo tetikasa manodidina ny 18 izay notantanina sy novatsian'ny sampan-draharaham-piarahamiasa iraisampirenena vola izany. Araka ny tatitra amin'ny lahatsary, mbola tsy mazava hoe iza amin'ireo tetikasa no hampiatòana ary inona no ho fiantraikany ara-tsosialy amin'izany fiovana izany.
Manasongadina ireo hevitra hafa mivezivezy mikasika izany fiovana natolotra izany ireo mpanatontosa ny lahatsary. Araka ny filazan'izy ireo, mety mikendry hametra ny ambaindain'ny avy any ivelany amin'ny sehatra mampandray anjara ny olom-pirenena sy ny mangarahara ny governemanta Nikaragòiana. Ny tanjona amin'izany dia ny hisorohana ireo fihetsiketsehana tahaka ireo izay nitranga tao Goatemala tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary niafara tamin'ny fiafaran'ny fitondran'i Otto Pérez Molina.
Tsy ofisialy ny tombantombana fa ny fanakatonana ireo fandaharan'asa fiton'ny PNUD noho ny baikon'ny governemanta sy ny fampihenana ny asan'ny Firenena Mikambana no nahatonga ny mpandrindra maharitry ny Firenena Mikambana hametra-pialàna.
“Toa tsy mitombina raha misy olon-kafa mitantana ny famatsiam-bola avy any ivelany “
Ho an'i Francisco Aguirre Sacasa, Minisitry ny Raharahambahiny Nikaragoiana teo aloha, misitery tanteraka ny fialàn'ilay diplaomaty, satria niasa teto amin'ny firenena nandritra ny 15 volana monja i Rucks, tamin'ny andraikitra izay tokony haharitra efa-taona.
Nandà kosa ireo mpikambana ao amin'ny governemanta, raha nanontanian'ny Confidencial fa nangatahan'ny Firenena Mikambana ny fialàn'i Rucks, saingy tsy nanamafy izy ireo fa te-hifehy mivantana ny tetikasa fiarahamiasa avy any ivelany ny Fanjakana, tsy mila mpanelanelana:
Toa tsy mitombina raha misy olon-kafa mitantana ny famatsiam-bola avy any ivelany raha nitantana vondrona afaka manatanteraka tsara na tsara kokoa ny andraikitra ny governemanta.
Ity politika, nolazain'ny PNUD tamin'ny fanambarana an-gazety navoakany, ity dia mikendry hanambatra amin'ny toerana iray ny fitantanana ofisialin'ny fiarahamiasa amin'ny any ivelany, mba hampifanitsy izany amin'ny paikady ara-politika sy ara-toekaren'ny governemanta. Tamin'ny fivoriana notontosain'ireo mpamatsy vola isan-karazany tamin'ny faramparan'ny volana Septambra, nanamarina ny fepetra noraisiny ny fitondran'i Ortega tamin'ny filazàna fa firenena manana vola miditra antonony i Nikaragòa, ka tokony hotanterahina tsy misy mpanelanelana ny fitantanana ny fifandraisana tahaka izany sy ny fanatanterahana ireo tetikasa.
Nanamarika i Mario Arana, mpahay toe-karena, mpandraharaha, ary filohan'ny Banky Foibe teo aloha fa tokony handinika ireo sampan-draharaham-piarahamiasa isaky ny firenena raha manana fahamatorana ampy sy fahaizana ilaina amin'ny fitantanana ny loharanon-karena amin'ny fomba tahaka izany ny Fanjakana. Manampahefan'ny governemanta teo aloha, Enrique Bolaños, kosa nampitandrina fa iankinan'ny ain-dehibe indrindra ny mangarahara hiantohana ny fanatanterahana ny maodely voalaza. Nilaza ihany koa izy fa ny tsy fahampian'ny fahazoam-baovao manan-danja, indrindra ny tondro ara-toekarena, dia niteraka ahiahy teo anivon'ny sendikà:
Mila mangarahara na tamberin'andraikitra avokoa ny firenena tsirairay, raha tsy izany iharan'ny olana isan-karazany. Voalohany indrindra, satria tsy maharaka izay zava-mitranga ao amin'ny firenena ny tsena, zava-dehibe ho an'ny toekaren'ny tsena ny hisosa tsara ary ny fepetra idealin'ny fampiasam-bola ny hijoro. Raha te-hampiakadanja ny fitomboan-karenany i Nikaragoà, dia tokony hametraka fepetra tsy azo hozongozonina sy ‘fitsipi-dalao’ mitombina tsara ahafahan'ny fampiasam-bola hivelatra…
Araka ny filazan'i Mauricio Díaz, mpikambana ao amin'ny Parlemanta Amerikana Afovoany avy amin'ny Antoko Liberaly Mahaleotena, resaka fahavononana ara-politika sy ara-panjakana ny fampiharana ny maodely tsy misy mpanelanelana:
Nahoana izy ireo no nanapa-kevitra hanokatra izany “baoritra” izany raha hatramin'izao fotoana izao dia mitantana an'io ho tsiambaratelom-panjakana ry zareo ary tsy mamoaka ny mangarahara amin'ny vahoaka? Inona no nitranga tamin'ny fiarahamiasa Venezoelanina? Tombanana ho efatra miliara dolara ny vola. Aiza io vola io? Izany no fanontanianay rehetra (…) Mety ho fomba iray iezahana hanehoana amin'izao tontolo izao izany fa hotantanina amin'ny fomba mangarahara ny vola, saingy efa marobe ireo zava-niseho teo aloha (rano latsaka tsy azo raofina intsony).
Nanazava tao amin'ny kaontiny ny minisitra teo aloha Norman Caldera fa mety hitondra tombontsoa ho an'ny firenena io maodely io, satria ahafahana mitantana mahomby kokoa ireo tetikasa, izay mifanohitra tamin'ny fitantanana misy mpanelanelana.
Na izany aza, averina indray, ny mangarahara no olana […] Mba hahatanteraka izany, mitaky mangarahara feno amin'ny fitantanana ny vola ireo mpamatsy vola, ka ho sarotra ny fanatanterahana izany ao Nikaragoà. Efa nahita isika fa tsy dia tena mangarahara izy ireo (ny governemanta) tamin'ny fitantanana ny fiarahamiasa amin'ny Venezoelanina.
Araka ny tatitry ny gazety mpivoaka isan'andro Panorama, nahazo 4,251 tapitrisa dolara Amerikana avy amin'ny fiarahamiasa Venezoelianina i Nikaragoà teo anelanelan'ny taona 2008 sy ny enim-bolana voalohan'ny taona 2015, izay fampindramam-bola manokana hanafarana solika ny ankamaroany, araka ny fanamarihan'ny Banky Foibe Nikaragoianina.
Hatramin'izao, toa niteraka fanontaniana kokoa fa tsy valinteny ity fiovana tampoka eo amin'ny rafitra andraisan'ny firenena maro anjara amin'ny fitantanana ny fiarahamiasa iraisampirenena ao Nikaragòa ity.